Kuratidza zvinyorwa neelebheri Skiing
Cable mota - Lysá hora, yepazasi station Černý potok
Lysá hora inowanikwa pamakiromita mana kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwenzvimbo yechando nzvimbo Rokytnice nad Jizerou. Iro cumulus gomo rine gomo rakapetana rakarara kumadokero pakati pePlešivec peak uye pegomo reKotel kumabvazuva. Nhamba yepamusoro, panogadzikwa geodetic point, yakafukidzwa necheni yakamira paine dzimwe nguva kujekeswa, uko kune smilky metadows ane isingawanzowanikwi maruva anopararira. Kunyatso chengetedzwa spruce masango anokura munzvimbo dzakaderera.
Nekuda kwekuti iko hakuna nzvimbo yakatarwa yevashanyi pamusoro pegomo chairo uye iri munzvimbo yekutanga yeKRNAP, kupinda mairi kunorambidzwa. Saka zvinoita kuti uwane pasi pechando munguva yechando nekotoni mota, kubva kumusoro kwayo…
Ski resort Šachty iri kuchamhembe Bohemia kumucheto kweguta reVysoké nad Jizerou, 15km kubva kuguta reSemily, 120km kuchamhembe kwedhorobha Prague. Ski resort Šachty munguva yechando inopa 3x yemazuva ano ski kusimudza, 2x kwekusimudza kwevana, 4 km yemaski ski mitsetse kune vese. Yazvino yechando system ye 90% yematebhenari. Kune vanoyambuka-skiers kune makumi matatu nemashanu emakiromita emigwagwa yakakwenenzverwa. Yakajeka yakaiswa masekete 35-1km. Yakagadziridzwa yeklasi uye yemahara tekinoroji. Kuchinja kamuri nenzvimbo dzekugadzirira ski.
Horní Mísečky (weGerman Ober Schüsselbauden) ndiye musha une makomo wakakwirira kwazvo muMakomo eGiant. Mukutaura kwekutonga, vanowira pasi peVítkovice. Dzakanga dzakavakirwa pamawere eMedvedin pakukwirira kwemamita mazana mashanu. Iyo inowanikwa kuchamhembe kweVítkovice uye kumadokero kwe Špindlerův Mlýn. Imba yekutanga yemakomo yakavakwa pano muna 1000. Pakutanga kwekuvapo kwayo, kunyanya veGerman vogadzira matanda nevagodhi vaigara pano. Pakati pezana ramakore rechi1642, kuongorora kwe ore kwakaitwa pano uye kuchine marecheni ekugadzirisa. Parizvino, zvinhu zviri muPorní Mísečky zvinoshanda zvakanyanya kutandara. Iyo inogadziriswa yakabatana ne Špindlerův Mlýn neiyo inonakidza Medvědín. Pakutanga kweHorni Misecky inogumisa mugwagwa II / 20 kubva kuJilemnice, kune iyo Masaryk Mountain Road inotungamira kuGoridhe Hill neVrbatova bouda. Uyezve, pane inopera nzira NS Prameny Labe. Kune mamwe matatu maitiro ekuchovha bhasiketi - K286A (kubva kuDolní Mísečky kusvika Špindlerův Mlýn), K1 (kubva kuŠpindlerův Mlýn kuenda Třídomí pedyo neLabská) uye K12 (kuenda kuVrbatova bouda). Vashanyi vanogona kusvika ipapo…